Home Wararka (Akhriso Xogta) Sida Farmaajo u fashiliyay in xal loo helo caqabadaha Doorashooyinka
(Akhriso Xogta) Sida Farmaajo u fashiliyay in xal loo helo caqabadaha Doorashooyinka
Dadaalkii loogu jiray xal loo helo caqabadaha hortaagnaa Doorashada Dadban ee gashay sanadka 2021 ayaa u muuqda mid burburay oo meesha ka baxay, kadib markii ay si xeelad ku dhisan Madaxtooyada Soomaaliya u fashilisay.
Wararka laga helayo Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in si fashil ah lagu soo afjaray waanwaantii uu ku howlanaa Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor, kadib kulamo xiriir ah oo shalay 8-da Janaayo 2021 Madaxtooyada Soomaaliya ku dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo K/Galbeed.
AFARTII QODOB EE LA ISKU HAYAY IYO SIDA LOO WAJAHAY
Kadib is-aragyadii magaalada Garowe ku dhex maray madaxda Puntland, Jubbaland, Galmudug, Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo qaar ka mida Musharixiinta ayaa rajo badan laga muujiyey in xal laga gaari karo arrimaha hortaagnaa Doorashada, laakiin waxay arrimihii isu bedeleen, in lagu dhawaaqayo inuu fashilmay waanwaantii arrimaha Doorashada.
Madaxweyne Qoorqoor iyo Ra’iisal wasaare Rooble ayaa loo diyaariyey inay shir jaraa’id qabtaan xalay xilli danbe, kaasoo aan la baahin arrimo saameyn ku yeeshay dartood, waxaana Ujeedka ugu weyni ahaa in fashilka waanwaanta dusha loo saaro Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, iyadoo Madaxweyne Farmaajo uu diiday shirkii la sugayay inay madaxda dowlada iyo Maamul Goboleedyada isugu yimaadaan si xal loogu helo arrimaha taagan.
Arrimaha soo socda ee xalka loo raadinayay waxay madaxtooyadu u marin habaabisay sida soo socota:
Arrinta Gobolka Gedo
Waanwaan hoose ayaa la isla meel dhigay oo ku saabsan in kuraas min saddex ah loo kala wareejiyo magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaarey, waxaana arrintan oo looga hoos bixi lahaa in ciidamada Dowladda laga saaro Gobolka Gedo ama ugu yaraan magaalada Garbahaarey ay cakiran markii Axmed Madoobe iyo Madaxweyne Farmaajo ku adkeysteen mowqifyadoodii hore.
Arrinta Guddiyada Doorashada oo madaxweyne Farmaajo ogolaaday in wax laga bedelo, wuxuu haddana ku xiray laba shuruud oo ah in marka hore ay Puntland iyo Jubbaland Guddiyadooda ka saaraan shaqaalaha iyo la-taliyeyaashooda. Sidoo kale waxay Madaxtooyada Soomaaliya dalbatay in Musharixiinta ay soo gudbiyaan liiska xubnaha ay doonayaan in laga saaro Guddiyada Doorashada iyo caddeynta ay u hayaan.
Arrinta Doorashada Somaliland
Arrinta Guddiyada Somaliland ayaa lagu fashilmay markii lagu heshiin waayey kulan dhex maray Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi iyo Ra’iisal wasaare ku xigeenka, taasoo ka danbeysay markii Mahdi Guuleed uu ka dalbaday Cabdi Xaashi inuu usoo gudbiyo 4 xubnood oo ku darsanayo Guddiga Doorashada Somaliland.
Cabdi Xaashi ayaa la sheegay inuu ka biyo diiday xubno uu ku darsado Guddiga Doorashada, kuna dooday inay arrintu ahayd in maamulka Doorashada xildhibannada kasoo jeeda Somaliland laga wadahadlo, lagana heshiiyo.
Xaaladda Gobolka Hiiraan ee dhalatay markii la doortay maamulka cusub ayaa ahayd arrin kale oo dib uga soo biirtay caqabadaha hortaagan doorashada, waxaana arrintaasi madaxda dowladda Federaalka ka dhigeen mid amni, iyadoo ciidamo sugaya amniga loo dirayo si doorashadu uga dhacdo.
Shirarkii dhex maray Madaxweyne Farmajo iyo Madaxweynayaasha maamul Goboleedyada taageersan ee Axmed Qoorqoor, Cali Guudlaawe, C/casiis Lafta-gareen oo kulamada qaarkood uu kula soo biireen Ra’iisal wasaaraha iyo Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, waxaa la iskula gaaray in dalku doorasho aado.
Dadaalkii xal u helidda Qoorqoor ayaa kusoo dhammaaday in Madaxweyne Farmaajo uu meesha ka saaray shir kale oo Garowe ka dhaca ama Muqdisho oo looga hadlo Doorashada, sida ay doonayeen Beesha Caalamka iyo madaxweynaha Puntland, wuxuuna ku adkeystay in lagu soconayo rabitaanka Madaxtooyada Soomaaliya ee ahaa in la qabto doorasho ay ka maqan yihiin Maamul Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Guddoomiyaha Aqalka Sare bannaanka ka joogo, ayna diidan yihiin Musharixiinta Madaxweynaha.
Eeda fashilka ku yimid waanwaanta ayaa la filayaa inay Madaxtooyada Soomaaliya dusha u saarto, Puntland iyo Jubbaland oo diiday inay waqtigii loo qabtay inay kusoo gudbiyaan liisaskii laga sugayey, Musharixiinta oo soo gudbin waayey xubnaha ay doonayaan in laga saaro Guddiyada Doorashada iyo caddeyntooda iyo Cabdi Xaashi oo diiday inuu magacaabo xubnihii uga mid noqon lahaa Guddiga Doorashada ee Somaliland.
Baaqashada shirkii jaraa’id ee lagu shaacin lahaa fashilka ku yimid waanwaantii arrimaha Doorashada ayaa dhaliyey shaki kale oo ku saabsan qaabka loo dhigayo arrintan iyo halista ka imaan karta, waxaana Madaxweyne Qoorqoor oo u janjeera madaxweyne Farmaajo saaran culeys weyn oo ah inuu qaato rabitaanka madaxweynaha ama inuu dhexdhexaadintiisii ku socdo.
Haddii arrinta kusoo dhammaato rabitaanka madaxweyne Farmaajo, Rajada markaas hartay ayaa noqoneysa inay Beesha Caalamka soo farageliso Doorashada halka dhinac u socoto ee uu doonayo Madaxweynaha inuu ka qabto saddex maamul Goboleed iyo Gobolka Banaadir.